लुइस र जेनेडा: शेफको परिवार
थकाउने कामको तालिकाले लुइस र जेनाडालाई आफ्नै लागि भविष्यको कल्पना गर्न प्रेरित ग .्यो। Lending Circles तिनीहरूलाई त्यहाँ पुग्न मद्दत गर्‍यो।
जेनेडा र लुइसले भिन्न प्रतिक्रिया देखाई जब तिनीहरूले Zenaida गर्भवती भएको थाहा पाए। लुइस आनन्दमय आँसु बहाउँदा, जेनाइडा बिहानको बिरामीको बारेमा चिन्तित थिइन्।
“तर सबै लुइसलाई भयो। ऊ निदाइरहेका थिए, ऊ थाकेका थिए, बिरामी थिए - म ठीक थिएँ! " उनले भनिन्।
एल साल्भाडोरबाट आएका स्पन्की तीस-जोडी जोडीले आफ्ना बुबाहरूको साथ धेरै फरक अनुभवहरू थिए। लुइसलाई उनका बुवालाई वास्तवमै कहिल्यै थाँहा थिएन, जबकि जेनाइडाले अझै पनि तीन बर्ष अघि उनको बुबाको मृत्यु भएको अनुभव गरे।
"म मेरो बुबासँग धेरै नजिक थिएँ र म लुइस र माटेओको लागि पनि यही चाहन्थें," उनले भनिन्।
२०१२ मा लुइसले आफु छोरा मतेओको लागि थोरै समयको साथ क्रूर घण्टा काम गरिरहेको भेट्टाए। उहाँ प्रायः १f-घण्टा दिन काम गर्नुहुन्थ्यो कि एक शेफको रूपमा दुई काममा। जेनेडालाई थाहा थियो कि यो समयको कुरा हो यो भन्दा पहिले कि उसले यसलाई खडा गर्न सक्तैन।
एक नयाँ व्यापार विचार
त्यसोभए, ती जोडीले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरे, D'maize खानपानपरिवारको रूपमा बढी समय बिताउने आशामा। तिनीहरू छिट्टै उनीहरूले ठूला अर्डरहरूमा लिनको लागि क्रेडिट आवश्यक छ भनेर बुझे। तर, जेनाइडासँग कुनै क्रेडिट ईतिहास थिएन किनभने उनले जहिले पनि नगदीमा बिलहरू तिर्थिन्।
जेनेडा लेन्डि C सर्कलमा सामेल भए र एक क्रेडिट स्कोर स्थापित पहिलो पटक, एक प्रभावशाली 5050०! उनले ब्यापारको लागि कारमा लगानी गर्न सानो loanण पाउन योग्य छिन् र ब्यापारिक भान्छामा र आफ्नो परिवारको लागि एउटा घरमा लगानीको लागि थप आवेदन दिने योजना छिन।
अब, दम्पतीको 8 कर्मचारीहरू छन् र नियमित रूपमा सिलिकन भ्याली कम्पनीहरूका लागि घटनाहरू पूरा गर्दछन् जस्तै फोरस्क्वायर र सान फ्रान्सिस्कोको खाना उत्सवहरूमा। तिनीहरू आफ्नो छोरा, माटेओबाट प्रेरणा पाइरहेका छन्, जो पनि उहाँ हुर्किए पछि एक शेफ हुन चाहन्छन्।
"सबैजनाको सपना हुन्छ, तर कहिलेकाँही तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ," लुइसले भने। “हामी विशेष छैनौं। हामीले हाम्रो समुदायको सहयोगमा यो काम गरेका छौं। ”